Rainer Maria Rilke. Nhetembo nhanhatu dzekupemberera zuva rako rekuzvarwa | Zvazvino Zvinyorwa
Rainer Maria Rilke aive mudetembi uye munyori wenhau uyo Ini ndakazvarwa muPrague pazuva rakaita nhasi muna 1875. Imwe yeiyo vanonyanya kukosha vanyori vemitauro yechiGerman yenguva yake uyezve pasi rese. Izvi ndizvo 6 yenhetembo dzake kurangarira.
2.1 Zuva rekuwa
2.4 *** Kupinda
2.5 Iyo Panther
2.6 Rwiyo rworudo
La mwana yeRilke yaive yakatarwa ne mhuri izere nemakakatanwa. Mushure mekusiya chikoro chemauto nekuda kwematambudziko ehutano, akazviita makosi mune zvinyorwa, hunyanzvi nhoroondo uye uzivi muMunich neBerlin. Akazvipira zvizere mukunyora uye vndakaenda kunyika dzinoverengeka yeEurope. Kugara mukati Paris, kwaakaburitsa mabasa akaita se Nhetembo nyowani, Requiemuye inoverengeka Iwo mabhuku ezvinyorwa zveMalte Laurids Brigge.
Munguva yekutanga Hondo Yenyika aive munich, kwaakashanda semunyori. Akapedzisira ave muSwitzerland, kwaakaburitsa mazita ake akakurumbira: Sonnets kuna Orpheus and the Elegies dzeDuino.
Sir: yakwana nguva. Yakareba zhizha.
Isa mumvuri wako pane masikati,
uye osunungura mhepo mhiri kwemapani.
Gadzira michero yekupedzisira mwaka;
uvape mamwe mazuva maviri kubva kumaodzanyemba,
Vakurudzire kusvika pakukura uye kuisa
muwaini gobvu kutapira kwekupedzisira.
Uyo asina izvozvi haangaite imba,
uyo ari oga izvozvi acharamba aripo,
Iye achatarisa, kuverenga, kunyora tsamba refu,
uye ndinofamba munzira,
kusagadzikana sekuumburuka kwemashizha.
Kana kutsva kwako dzimwe nguva kunotishamisa zvakanyanya
zviri mukati mako, mukati,
petari kurwisa peturu, iwe zorora.
Wide akamuka akaisirwa ane centre
hope, pavanobata, zvisingaverengeke,
hunyoro hwemoyo wakanyarara
izvo zvinokwira kumuromo wakanyanyisa.
Hongu ndinokusuwa. Ndinotsvedza
ruoko rwakabatana, kurasikirwa neni,
hapana tariro yekupokana nazvo
izvo, sekubva kudivi rako, zvinosvika kwandiri
chakakomba, chisina kutsauswa, chisina hukama.
… Nguva idzodzo: Maitiro andaive Mumwechete Chinhu,
hapana chingachema, uye chinganditengesa;
kunyarara kwangu. Yakanga yakangofanana nedombo
iyo rwizi rwunodhonza kugunun'una kwayo!
Asi mukati mangu, mumavhiki ano
yechirimo, pane chimwe chinhu chakavhura zvishoma nezvishoma
kubuda mugore rerima asingazive.
Chinhu chakasiya hupenyu hwangu hunopisa
muruoko rwemunhu asingazivi
kuti ndaivapo nezuro.
Chero iwe uri: pakuvira kwezuva buda
yemumba mako, umo iwe unoziva zvese;
nechekure ndiko imba yako
sekuguma: chero iwe uri.
Kufanana nemeso ako ayo asinganetsi, aneta,
kubva pachikumbaridzo chakapedzwa chavanogona kubvisa,
unonhonga muti mutema zvishoma nezvishoma
kumuisa pamberi pedenga: mutete, wega.
Uye ndimi makaita nyika. Uye yakakura, uye yakafanana
izwi rinoti nyangwe mukunyarara rinokura.
Uye maererano nezvaunoda, nzwisisa zvarinoreva
maziso ako akadzikiswa zvinyoronyoro ...
Kutarisa kwake kwave kuneta nekutarisa zvakanyanya
iwo mabara pamberi pake, mukusingaperi,
kuti hapana chimwe chinhu chaigona kupinda mairi.
Zvinoratidzika kwaari kuti kune zviuru zvemabhawa chete
uye kuti kuseri kwavo hakuna nyika.
Sezvaunoramba uchidhirowa zvakare uye zvakare
denderedzwa rakamanikana netsoka dzavo,
kufamba kwaro kumeso, kwakatsetseka paws
iri kuratidza kutamba kunotamba,
kutenderedza nzvimbo iyo iye achiri akangwarira
Chete dzimwe nguva, tendera mukunyarara, kuvhura
yemaketeni akaviga vadzidzi vake;
uye kuyambuka chifananidzo mukati,
inotsvedza kuburikidza nemhasuru dzakaomarara
inowira mumoyo make, ndokusvava, ndokufa.
Ungabata sei mweya wangu ku
izvo hazvibate zvako?
Ndinofanira kuisimudza sei
kunyange zvimwe zvinhu, pamusoro pako?
Ndinoda kuviga pasi pechinhu chero chakarasika,
mukona isingazivikanwe uye yakanyarara
kwaigona kutadza kubvunda.
Asi zvese zvatinobata, iwe neni,
inotibatanidza, sekurova kweuta,
kuti izwi rimwe chete rinotanga kubva patambo mbiri.
Vakatimanikidza pachiridzwa chipi?
Uye ruoko rwupi runotirova tichiita ruzha irworwo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Rainer Maria Rilke. Nhetembo nhatu dzekupemberera zuva rako rekuzvarwa
Cicero. 3 zvidimbu zvebasa rake pagore rekufa kwake